Chii chekuona nekuita muMontparnasse tower muParis | Absolut Kufamba
Alberto Makumbo | | France, Paris
Vanoti iyo Montparnasse tower ndiyo nzvimbo yakanaka kwazvo muParis nekuti ndiyo yega yausingakwanise kuiona. Chikumbaridzo chinowanzorambwa nevaParis asi chakarumbidzwa nevose vafambi vanouya kuGuta reRudo vachitsvaga kusiyanisa uye mamwe emawonero akanaka.
Takakwira here kumusoro kwepamusoro kwe Montparnasse shongwe?
1 Nhanganyaya kuMontparnasse tower
2 Zvokuita muMontparnasse tower
3 Ruzivo runoshanda
4 Chii chekushanyira padyo neMontparnasse tower
Nhanganyaya kuMontparnasse tower
Kwakatangira iyo inozivikanwawo sekushanya Montparnasse kwakazvarwa mu Mont Parnasse, chakakwiridzwa chikomo muna 1725 icho chaizokwezva kutariswa kwevamwe ve brothels, nzvimbo uye cabarets anonyanya kutsvakwa enguva, kunyanya nekuti munzvimbo ino, kunyanya muCarrer de la Gaité, varidzi vacho havana kubhadhara mutero pazvinwiwa zvinodhaka. Mukana wegoridhe wakasimbiswa nekuvapo kwemakofi aripo nanhasi senge La Rotonde kana Le Select, yakavhurwa pakutanga kwezana ramakumi maviri.
Kutanga muna 1930, kuregeredzwa kwenzvimbo iyi kwakabatana nehurongwa hweSNFC, kambani huru yechitima cheFrance kushandura chiteshi chakange chisisabatsire. Icho chokwadi chakanangana nehurongwa hwekuronga kwemadhorobha iyo, kunyangwe kutanga kwayo kwakanyara, kwakasimbiswa kuma50 apera, panguva iyo pfungwa yekuvaka shongwe yeMontparnasse yakatanga kuumbika mumatunhu eguta kunyangwe kubva pamharadzano ye kushoropodzwa maererano nekukwirira kwayo kwakanyanya.
Mushure mekudaidza makwikwi, Urbain Cassan, Eugène Beaudoin, Louis de Hoÿm de Marien naJean Saubout vanova vavaki vakasarudzwa kuvaka shongwe, ane dombo rekutanga rakaiswa muna 1970. Pakupedzisira, muna Chikumi 18, 1973, yakavhurwa nehurefu hwemamita 209, iri chivakwa chakareba kwazvo muParis kusvikira kugadziridzwa kweiyo kushanya Fist de La Défense mugore ra2010.
Kunyangwe nekufamba kwenguva, mubatanidzwa weParis wakatsoropodza pfungwa yeshongwe isingatarisi pane inopfuura chiitiko chimwe, chokwadi ndechekuti skyscraper yave nzvimbo huru yenharaunda yeMontparnasse izere nezvirongwa zvinonakidza, pamusoro pekufungidzira imwe kubva maonero akanakisa muParis kana zvasvika pakuwana yakakwana panoramic maonero neiyo Eiffel Tower kumashure.
Zvokuita muMontparnasse tower
Inowanikwa pa33 Maine Avenue, iyo Montparnasse tower parizvino iri pamberi pechiteshi chechitima chezita rimwe chete, iri muzinda mukuru wemahofisi akati wandei eMutuelle Génerale de L'Éducation Nationale, sangano rinogara pasi pe52 uye rine anosvika zviuru zvishanu. vashandi mune ako instalations.
Pakati pezvinokwezva, chinonyanya kudiwa ndechekuti iyo yekutarisisa iri pahofisi yechi56, kubva kwaunogona kuwana mamwe akanakisa maonero eParis, kunyanya pakuvira kwezuva. Kusiyana nemaonero eEiffel Tower, iyo yeMontparnasse Tower haina kunyanya kuzara, ichivimbiswa kupfuura pasina kana kumiswa mumutsetse. Maonero acho pachawo anosanganisira kuratidzwa kwemifananidzo yakare yeguta uye akasiyana mafomu eema multimedia anotsanangura ruzivo runonakidza nezve nharaunda.
Kana iwe urikutarisawo kuti urume, iyo imwechete pasi 56 dzimba yekudyira, Le Ciel de Paris, iyo inopa menyu yeFrench neyekunze chikafu, kunyange hazvo iri 360 cafe, iyo yepamusoro panoramic bar muEuropeInokukoka iwe kuti uve nesangweji kana chinwiwa mushure mekusvika pakuona.
Inofungidzirwa kuti, izere, iyo Montparnasse tower inogamuchira yegore rose 600.000 vashanyi.
Paunenge uchishanyira Montparnasse tower, unofanirwa kutora metro mitsara 4, 6, 12 uye 13 nekumira kuMontparnasse-Bienvenüe, nepo mabhazi 28, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95 uye 96 anosanganisira. yekumira padyo neiyo skyscraper.
Paunenge uchinge wasvika, edza kuzviita mukati mehurongwa hweshongwe, iyo yakakamurwa kuita mwaka mbiri dzakasiyana: kubva Kubvumbi 1 kusvika Nyamavhuvhu 30 kubva 09:30 am kusvika 23:30 pm uye kubva Gumiguru 1 kusvika Kurume 31, Svondo kusvika China kubva 09:30 kusvika 22:30 neChishanu, Mugovera uye mazororo kubva 09:30 kusvika 23:00.
Pamusoro pe mitengo yedhorobha reMontparnasse, ndeaya:
Vakuru: 18 euros.
Vechidiki vari pakati pegumi nemaviri nemakore gumi nemasere ekuberekwa nevadzidzi: 15 euros.
Vana vari pakati pemakore matanhatu ne4 ekuberekwa: 9,50 euros.
Vanhu vane kuderedzwa kwekufamba: 8,50 euros.
Kugamuchirwa kuri mahara kana iwe ukashandisa iyo yakakurudzirwa Paris Pass.
Chii chekushanyira padyo neMontparnasse tower
Nzvimbo yeMontparnasse ndeimwe yeanonyanya kushevedzera muParis, nekuti nzvimbo yaro kumahombekombe ekuruboshwe eParis yakariita nzvimbo yevanyori vakaita saMaupassant, De Beauvoir kana Cortázar, vachiiswa nenjodzi nehunyanzvi hwakadaro hweguta.
Akayambuka ne Boulevard MontparnassePano iwe unogona kuwana dzakasiyana maresitorendi nenzvimbo kwaunogona kuve negirazi rewaini kana kukundwa kune akasiyana chaiwo echikafu cheFrench mune yakajairika Parisian mhepo.
Kana iwe zvakare uchida kuzvifadza iwe nezvimwe zvakasarudzika zvekushanya, iyo Catacombs eParis iwo ari padyo neshongwe. Netiweki ye migero inosvika kumakiromita mazana matatu inogara dzimba dzevanhu vane mamirioni matanhatu kuti kubva muna 1786 uye nhenda dzakasiyana dzakaitika panguva iyi dzakavigwa pasi peguta kuitira kudzivirira kupararira.
Imwe nzvimbo inonakidza inogadzirwawo ne Luxembourg magadheni. Yakagadzirwa muna 1612 zvichitevera zvido zvaMarie de Medici, idzi dziri nzvimbo dzepakati muParis uye dzakanakira a kupikiniki Mumwedzi yezhizha, roja chikepe, unakidzwe nezvakakomberedza zvakasiyana zvinoitirwa vana vadiki uye kunyange kutora chikamu mumusangano wekuchengeta nyuchi, sezvo mukoko mukuru uchigara pano.
Kana iwe ukaenda kuParis uye usingazive pekutangira, iyo Montparnasse tower nenharaunda yayo vanova vanobatana zvakanyanya kana zvasvika pakutsvaga guta riri mhiri kweEifeel Tower uye Notre Dame. Chiratidzo chemazuva ano icho chichiri kuverenga nhoroondo yemazana emakore apfuura apo ichienda kuzvimanje-manje uye nehunyanzvi, ino iri nzvimbo yakanakisa kana zvasvika pakunzwa guta guru reFrance muchanza cheruoko rwako.
Ungada here kushanyira Montparnasse tower?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Chii chekuona nekuita paMontparnasse tower muParis